SomaliaReport: Makamada Sare Casilaada Guddoomiyaha Dekada
By MOHAMED BEERDHIGE 12/24/2011
Jimcihii, Maxkamada Sare ee Dawlada Ku Meel Gaarka Soomaaliya (DKMG) ayaa ku dhawaaqday guddomiyaha Dekada Muqdisho, Sayid Cali Macallin Cabdulle, inuu jagada ka dego markii lagusoo eedeeyey musuqmaasuq iyo lacag isdaba marin. Wareegto Maxkamada Sare udirtay Wasaarada Gaadiidka Cirka iyo Dhulka ayaa codsatay in Mudane Cabdulle xafiiska firaaqeeyo inta baaritaanka lagusoo oogay socdo.
Nuqulka kowaad oo kasoo baxay Xafiiska Xeer-Illaaliyaha Guud oo uu saxiixay ku Xigeenka Maxkamada Sare Dr. Cali Maxamed Yusuf (Cali Yare) ayaa ku eedeeyey Mudane Cabdulle oo ahaa guddomiyaha dekada ilaa Sebtember 11, 2010 lacag isdaba marin, laaluush, iyo sharci daro usoo ururinta dekhliga dowlada iyo dhunsasho maaliyad loogu talo galay dadka abaaburuhu waxyeeleeyeen.
Qoraalka loosoo gudbiyey wasaarada, maxkamadu waxay Mudane cabdulle ku eedaysay maamul-xumada in ku dhow $4.5 million ee canshuuraha dekada, kirada kaydka, oo lagu eedeeyey inaan la dhigin Bangiga Dhexe ee Soomaaliya, ladhigay koonto shakhsiyeed. Lacago dhunsiga lagusoo eedeeyey waxaa ka mid ah $990,000 oo kiro ahaan looga qaaday hay’adaha samafalka sida Foondada carruurta ee Qaramada Midoobay (UNICEF) iyo Borogaraamka Cunnada Dunida (WFP), iyo malaayiin doolar oo kasoo gashay $36 canshuur lasaarayey halkii metric tan ee shixnadaha deeqda ee isticmaalayey Dekada Muqdisho.
Mudane Cabdulle waxaa kaloo lagu soo eedeyey inuu jeebka ku ritay 4.3 billion oo Shilling Soomaali ah (udhiganta $140,000) oo uu kasoo ururiyey ganacsatada leh gaadiidka dekada ka shaqeeya oo loogu talagalay dadka Soomaaliyeed ee abaartu saameysay.
Wax faahfaahin ah kama soo bixin Wasaarada Gaadiidka Cirka iyo Dhulka.